Politika · Janoary, 2015 · Global Voices teny Malagasy
Politika · Janoary, 2015
Tantara mikasika ny Politika tamin'ny Janoary, 2015
Taorian'ny nampiasan'ny mpitandro filaminana hery tamin'ny fanadiovana ny mpanao hetsi-panoherana teo amin'ny toerana fanaovana hetsika any Mong Kok, nankahery ireo mpanohana azy ireo mpikatroka mafana fo mba handeha hiantsena àny ary mba ho marika fitakiana ilay toerana.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 18 Janoary 2015
‘Ankizy Maro No Very Amin'ny Toerana Kely Toy Izany': Misaona Ny Lozam-piara Fitateram-bahoaka i St. Vincent
Karaiba 16 Janoary 2015
Latsaka tanaty hantsana iray tao avaratr'i St. Vincent ny fiara iray fitaterana, nahafatesana ankizy dimy raha kely indrindra noho izy io nidoboka tamina morondranomasina vatovatoana.
Avotsotry Ny Filoha Venezoelana Ny Mpitarika Ny Mpanohitra Raha Afahan'i Etazonia i Oscar López Rivera
Amerika Avaratra 10 Janoary 2015
Any Am-ponjan'i Etazonia 33 taona izao ilay Poerto Rikana Oscar López Rivera. Antsoina ho gadra politika voatazona ela indrindra ao amin'ny Ilabolantany Andrefana izy.
Fandàvana Fanitrihana Am-pàsana Ny Zazakely “rom” Tao Frantsa : Anelanelan'ny Hatezerana Amin'ny Maha-olona Sy Ny Fahabangàn'ny Lalàna
Frantsa 07 Janoary 2015
Nolavin'ny ben'ny tanànan'i Champlan ny handevenana zazavavikely iray tao amin'ny kaominina iadidiany satria hoe tany amin'ny kaominina hafa no natao ny filazana fahafatesana.
Azia Atsinanana 05 Janoary 2015
Thailandy tamin'ny 2014: hetsika an-dàlam-be, fitondrana amin'ny tany misy hotakotaka, sivan'ny haino aman-jery sy ny tranonkala ary ny fiakaran'ny governemanta mpanongam-panjakana eo amin'ny fitondrana. Hitondra fiovàna ve ny 2015 ?
Tsy Tian'ny Manampahefana Shinoa Ny Fanahin'ny Krismasy Farany Teo
Azia Atsinanana 04 Janoary 2015
Hoan'ireo Shinoa tanora maro dia fotoana fialam-boly mahafinaritra tsy misy ifandraisany loatra amin'ny fivavahana ny krismasy, saingy ny manampahefana kosa mijery ilay fety tandrefana ho fandrahonana.